सकिएकै हो त बिट्क्वाइनको जादू ? | गृहपृष्ठ
Home अन्तरराष्ट्रिय सकिएकै हो त बिट्क्वाइनको जादू ?
on: November 20, 2018 अन्तरराष्ट्रिय, मुख्य खबर
विगत एक हप्तामा नै बिट्क्वाइनको भाउ एक तिहाईभन्दा बढीले घट्यो ।
बजार पूँजीकरण ७८ अर्ब ३२ करोड डलरमा सीमित ।
मङ्सिर ४, टोकियो (जापान) । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो क्रिप्टोकरेन्सी बिट्क्वाइनको भाउ अहिले यो वर्षकै न्यून विन्दुमा छ । क्रिप्टोकरेन्सी विनिमय हुने वेबसाइट क्वाइन डेस्कमा बिट्क्वाइनको भाउ मङ्गलवार १५ दशमलव १६ प्रतिशत अर्थात् ८ सय ४ डलर ८५ सेण्ट घट्यो । यो कमीसँगै मङ्गलवार बिट्क्वाइनको भाउ प्रतिगोटा ४ हजार ५ सय ५ डलर २९ सेण्टमा आएको छ ।
विगत ७ दिनमा बिट्क्वाइनको भाउ १ हजार ७ सय ७२ डलर ३३ सेण्ट घटेको क्वाइन डेस्कले देखाएको छ । विगत १ वर्षमा भने बिट्क्वाइनको भाउ ७५ प्रतिशतभन्दा धेरै घटेको छ । गत वर्षको नोभेम्बरको यति बेला तिर बिट्क्वाइन झण्डै २० हजार डलरमा थियो । महिनौंसम्म शान्त र स्थिर रहेको बिट्क्वाइनको भाउ गत हप्तादेखि ओरालो लाग्न थालेको थियो । अक्टोबर महीनाभर बिट्क्वाइन ६ हजार ४ सय डलर आसपास रहेको थियो ।
मङ्गलवारको कमीसँगै बिट्क्वाइनको बजार पूँजीकरण ७८ अर्ब ३२ करोड डलरमा सीमित भएको छ । गत वर्षको यही अवधिमा बिट्क्वाइन्को बजार पूँजीकरण ३ खर्ब डलरभन्दा धेरै थियो । पछिल्लो समय क्रिप्टोकरेन्सी बजारमा देखिएको उथल-पुथलका कारण यो कमी आएको विश्लेषकहरु बताउँछन् । पछिल्लो अवस्थालाई बिट्क्वाइनको ‘जादू’ सकिएको रुपमा पनि हेर्न लागिएको छ । पछिल्ला हप्तामा इथेरियमलगायत अन्य प्रमुख क्रिप्टोकरेन्सीको भाउ पनि दोहोरो अङ्कले घटेका छन् । एजेन्सी